Fashion joogta ah: waxa ay tahay, sifooyinka iyo talooyin | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 20/04/2022 12:00 | Deegaanka
Ecolabels ayaa inta badan soo baxa safka hore marka laga hadlayo fashion waara, khilaafyada la xidhiidha wax soo saarka warshadaha fogfog, laakiin dadaal weyn oo lagu xallinayo iyo dhar badan oo dabiici ah oo ka nadiif ah alaabada sunta ah. Nasiib wanaag, aragtidan waxaa lagu xaqiijiyay adduunka oo dhan iyadoo ay ugu wacan tahay ballaarinta shirkadaha caalamiga ah iyo hal-abuurka dhalinyarada kuwaas oo siinaya maroojin cusub fikradda moodada waara.
Sababtan awgeed, waxaan dooneynaa inaan u hibeyno maqaalkan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato moodada joogtada ah, waxa sifooyinka iyo faa'iidooyinka ay yihiin.
1 Moodo waara
2 Caadooyinka moodada joogtada ah
2.1 wax badan ha iibsan
2.2 Maalgelinta moodooyinka moodada waara
2.3 Ha iloobin moodada iyo dharka gacan labaadka ah
2.4 Kirada sidoo kale waa ikhtiyaar
2.5 Iska ilaali dib-u-dejinta
2.6 Si toos ah u fahan saamaynta alaabta iyo dharka
2.7 Ka fiirso cidda samaynaysa dharka aad xidhato
2.8 Raadi calaamado ay ka go'an tahay sayniska
2.9 Raadi calaamado saameyn togan ku leh deegaanka
Aasaaska moodada ganacsiga moodada waara ayaa mara ilaalinta khayraadka dabiiciga ah, saamaynta deegaanka hoose ee alaabta la isticmaalo (taas oo ay tahay inay awood u yeelato in hadhow lagu daro silsiladda dib-u-warshadaynta), hoos u dhigista raadadka kaarboonka iyo ixtiraamka dhaqaalaha iyo deegaanka shaqada. shuruudaha shaqaalaha ku lug leh alaabta ceeriin ilaa meesha iibka.
Warshadaha moodada waxay hore ugu faanaan naqshadeeyayaal, moodallo iyo dad caan ah oo caan ku ah kuwaas oo ku guulaysta moodada waara. Kuwaas waxaa ka mid ah Lucy Tammam, Stella McCartney, Frock Los Angeles, Amour Vert, Edun, Stewart+Brown, Shalom Harlow iyo Summer Rayne Oakes.
Mooshin joogta ah ayaa si tartiib tartiib ah u helaya booskeeda warshadaha. Sidoo kale waxaa jiray kobac xagga abaabulka tartamada, ciidaha, xiisadaha, barnaamijyada gelinta, macluumaadka xirfada ee blogyada iyo in ka badan..
Tusaale ahaan, Todobaadka Fashion-ka ee Portland, kaas oo dhawaan lagu soo gebagebeeyey Maraykanka, waxa la dejiyey 100% oo keliya naqshadaha deegaanka ku habboon. Caasimadda Isbaanishka, Dukaanka Mashruuca Wareegtada ayaa sanadkan la furay iyadoo la isku dayay in lagu guuleysto tartanka Madrid catwalk iyadoo la siinayo dhar waara. Maalmaha moodada waara ayaa sidoo kale lagu qabtay Madrid afar sano. Argentina, Verde Textil waxay soo bandhigtaa alaabo leh eber saamaynta deegaanka iyo 100% ka go'naanta bulshada, iyadoo wax lagu iibinayo online.
Kiis u qalma fiiro gaar ah waa kan astaanta Heavy Eco, oo ah shirkaddii moodada ugu horreysay ee laga dhiso xabsiyada, soo saarta dhar waara. Marka lagu daro shaqada dib-u-dhexgalka ee in ka badan 200 oo dambiilayaal Estonia ah oo la soo shaqeeyay shirkadda, 50% faa'iidada waxay u baxdaa inay caawiyaan dadka darbi-jiifka ah iyo agoonta ee magaalada Tallinn.
Caadooyinka moodada joogtada ah
wax badan ha iibsan
Waa habka ugu waxtarka badan ee loo maareeyo boqollaal bilyan oo dhar ah oo dunida laga soo saaro sannad kasta. Harriet Vocking, oo ah lataliye u ah hay'adda istiraatijiyadda waarta ee Eco-Age, waxay ku talinaysaa in aan nafteena waydiino saddex su'aalood ka hor intaanad iibsan dharka: «Maxaan rabnaa inaan iibsano iyo sababta? Maxaan runtii u baahanahay? Waxaan u isticmaali doonaa ugu yaraan soddon jeer oo kala duwan".
Maalgelinta moodooyinka moodada waara
Hadda oo aan go'aansanay inaan ku iibsanno indho badan, waa maxay habka ugu wanaagsan ee lagu taageerayo noocyada kuwaas oo si cad u heellan inay noqdaan kuwo waara. Tusaale ahaan, Collina Strada, Chopova Lowena ama Bode waxay u isticmaalaan agab dib loo warshadeeyay naqshadahooda. Waxay sidoo kale kaa caawineysaa inaad shaandhayso noocyada la heli karo iyadoo lagu saleynayo nooca dharka ay suuqa ku leeyihiin, haddii ay tahay dharka isboortiga ee waara sida Girlfriend Collective ama Indigo Luna, dharka dabaasha sida Stay Wild Swim ama Natasha Tonic, ama denim sida Denim dibadda ah ama dib-u-deeqidda.
Ha iloobin moodada iyo dharka gacan labaadka ah
Goobaha sida The RealReal, Vestiaire Collective ama Depop, ka dukaameysiga moodada canabka ah iyo dharka gacan labaad waligeed ma fududa. Ka fakar inaadan siin doonin kaliya dharka fursad labaad, laakiin waxaad sidoo kale kaa caawin doontaa inaad yareyso saameynta deegaanka ee dharkaaga. Fashion Vintage sidoo kale waxay leedahay faa'iido weyn in dharkeedu uu yahay mid gaar ah. Haddii kale, fiiri sida Rihanna ama Bella Hadid u eg yihiin, taageereyaal waaweyn.
Kirada sidoo kale waa ikhtiyaar
Markaan leenahay aroos caadi ah ama gala (Covid aawadiis, dabcan), ikhtiyaarka la aqbali karo ayaa ah inaan kireyno dharkayaga. Tusaale ahaan, daraasad dhowaan lagu sameeyay UK Waxa uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey in dalku uu soo iibsado 50 milyan oo dhar ah xilli kasta oo uu xidho hal mar oo kaliya. Saamayn, sax? Su'aal kama taagna inaynu ka fiicanahay inaan laadno caadadan, gaar ahaan markaad tixgeliso in ilbiriqsi kasta oo dhaafa ay u dhiganto baabuur xamuul ah oo qashinka dun ah oo gubanaya (ama ku dhammaanaya meel qashinka lagu daadiyo).
Iska ilaali dib-u-dejinta
Calaamaduhu waxay xaqiiqsadeen inaan ogaanayno raadkeena deegaanka. Taasi waa sababta ay inta badan isku dayaan inay u dhexgalaan alaabooyin leh sheegashooyin aan caddayn oo marin habaabin kara ama si toos ah u marin habaabinaya joogteynta dharkooda. Ha ku kadsoomin dhaqdhaqaaqyada cagaaran hana dhaafin sheegashada "waaraa", "cagaaran", "mas'uul" ama "miyir" oo aad ku arki doonto calaamado badan. Hubi inay run yihiin waxa ay sheegayaan.
Si toos ah u fahan saamaynta alaabta iyo dharka
Markaad si joogto ah wax u iibsanayso, waxaa muhiim ah in la fahmo saameynta ay leeyihiin walxaha qaabeeya dharkeenna. Qiyaas ahaan, qaanuunka guud ee wanaagsan ayaa ah in laga fogaado fiilooyinka synthetic sida polyesterka (walax aan ka helno 55% dharka aan xidhno) sababtoo ah ka kooban yahay shidaal fosil ah waxayna qaadataa sanado si ay u qudhunto. Waa inaad sidoo kale fiiro gaar ah u yeelatid dharka dabiiciga ah. Tusaale ahaan, suufka dabiiciga ah wuxuu isticmaalaa biyo aad uga yar (oo aan lahayn sunta cayayaanka) marka la beero suufka caadiga ah.
Sida ugu fiican ee aan sameyn karno waa in aan raadino dhar leh shahaadooyin waara si loo hubiyo in dharka iyo alaabta ay isticmaalaan ay saameyn kooban ku leeyihiin meeraha: tusaale ahaan, Halbeegga Dharka Dabiiciga ah ee Caalamiga ah ee suufka iyo dhogorta; Shahaadooyinka Kooxda Shaqada Hargaha ee maqaar ama dhejisyada shahaado Golaha maaraynta kaynta ee fiilooyinka caagga ah.
Ka fiirso cidda samaynaysa dharka aad xidhato
Haddii cudurku uu wax sameeyay, waxay ahayd in la muujiyo dhibaatooyinka maalinlaha ah ee shaqaale badan oo ka shaqeeya warshadaha dharka. Markaa waa muhiim in la hubiyo inay helaan mushahar nololeed oo ay helaan xaalado shaqo oo cadaalad ah. Magacyada aaminka ah ee bixiya macluumaadka ku saabsan siyaasadahooda mushaharka, shaqaalaynta iyo xaaladaha shaqada ee warshadda, meel kasta oo ay joogaan.
Raadi calaamado ay ka go'an tahay sayniska
Hal dariiqo oo lagu ogaan karo haddii shirkaddu ay si dhab ah u xiisaynayso dhimista saamaynta deegaanka waa in la arko haddii ay ka go'an tahay heerarka sayniska ee waara. Noocyada u hoggaansama nidaamka hindisaha hagitaan ku salaysan sayniska, oo ay ku jiraan Burberry ama Kering, shirkadaha raaxaysiga ee ka dambeeya Gucci ama Bottega Veneta, ayaa looga baahan yahay inay u hoggaansamaan heshiiska Paris ee dhimista qiiqa sii daaya.
Raadi calaamado saameyn togan ku leh deegaanka
Shirkadaha joogtada ah sida Mara Hoffman ama Sheep Inc waxay mar hore ka fekerayaan sida ay saameyn togan ugu yeelan karaan deegaanka marka lagu daro yaraynta saameyntooda. beeraha dib-u-soo-nooleynta, horyaalnimada farsamooyinka beeraha sida abuurka tooska ah ama dalagyada daboolka, waxa ay helaysaa taageero warshadeed oo aad iyo aad u badan iyada oo leh yool cad: si kor loogu qaado tayada ciidda iyo ilaalinta kala duwanaanshaha noolaha.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto moodada waara iyo muhiimada uu leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Moodo waara